IYurophu isusa izithintelo zokuhamba kwamanye amazwe, ibeka amanye amagama kwezinye iindawo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » IYurophu isusa izithintelo zokuhamba kwamanye amazwe, ibeka amanye amagama kwezinye iindawo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
IBhunga laseYurophu lihlaziya uluhlu lwamazwe, imimandla ekhethekileyo yolawulo kunye namanye amaziko kunye nabasemagunyeni ekumele bathotyelwe kuwo.
I-EU inyusa kancinci izithintelo zokuhamba ezingabalulekanga.
Amazwe amahlanu kunye nequmrhu elinye / igunya lommandla lisuswe kuluhlu lokuphakamisa izithintelo.
I-Israel, iKosovo, iLebhanon, iMontenegro, iRiphabhlikhi yaseNyakatho yeMakedoni kunye ne-USA zisuswe kuluhlu.
Ukulandela uphononongo phantsi kwengcebiso zokuphakanyiswa ngokuthe ngcembe kwezithintelo zethutyana kuhambo olungabalulekanga kwi-EU, iBhunga lihlaziye uluhlu lwamazwe, imimandla ekhethekileyo yolawulo kunye namanye amaziko kunye nabasemagunyeni ekufanele ukuba basuse imiqobo yokuhamba.
Ngokukodwa, i-Israel, iKosovo, iLebhanon, iMontenegro, iRiphabhlikhi yaseNyakatho yeMakedoni kunye ne ilizwe elidibene lasemelika zisuswe kuluhlu.
Ayibalulekanga hamba uye kwi-EU evela kumazwe okanye amaziko angadweliswanga kwiSihlomelo I sixhomekeke kuthintelo lwexeshana lokuhamba. Oku akunamkhethe ekubeni amazwe angamalungu aphakamise isithintelo sethutyana kuhambo olungabalulekanga oluya e-EU kubahambi abagonywe ngokupheleleyo.
Njengoko kucacisiwe kwisindululo seBhunga, olu luhlu luya kuqhubeka lujongwa rhoqo kwaye, njengoko kunjalo, luhlaziywa.
Ngokusekwe kwiikhrayitheriya kunye neemeko ezichazwe kwisindululo, ukusukela nge-30 Agasti 2021, amazwe angamalungu kufuneka ngokuthe ngcembe asuse imiqobo yokuhamba kwimida yangaphandle kubahlali bala mazwe alandelayo:
I-China (ngokuxhomekeke ekuqinisekiseni ukuphindaphinda)